Kedu ihe bụ mmalite nke spam? - Eziokwu Ndị Na-akpali Mmasị Site na Ọkachamara Ọkachamara
Spam bụ njide nke njakịrị. Otú ọ dị, a na-agbanye ngwaahịa a na mkpọ mkpọ na akụkọ ntolite America. O nweela ihe a na-ewu ewu kemgbe afọ ole na ole, ọ na-esi na nri ehihie gaa na akara ngosi omenala - temperature and humidity monitor. Hormel Company malitere na spam mbụ na narị afọ nke 19 wee bụrụ ihe kachasị amasị ya n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. Egburu ya na United States n'ọtụtụ dị ukwuu n'ihi na e weere ya na ọ tọrọ ụtọ karịa anụ ndị ọzọ. Ka oge na-aga, spam ghọrọ ihe a ma ama na ihe kachasị amasị ndị agha ndị mba ọzọ, nke a maara maka mbupu na nkwụsi ike ya.
Jack Miller, Semalt Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ahịa, na-agbakwụnye na spam ka na-ama ma jiri ya na Hawaii, ebe ọ nwere otu n'ime ọnụ ahịa kachasị elu nke ọ bụla na-elekọta. Ọ bụ otu a ma ama na akụkụ ụfọdụ nke Asia na United Kingdom. O kwesịkwara icheta na a na-ere spam ugbu a n'ihe karịrị mba iri anọ n'ụwa nile.
Egwuregwu Spam isi
Ihe kachasị mma nke spam na-acha anụcha bụ anụ ezi na ham, starch, salt, sodium nitrite, sugar, na mmiri. A na-eji starch emebe eme ihe maka anụ na-adịgide adịgide, ebe sodium nitrate na-arụ ọrụ dị ka onye na-echekwa nchekwa. Ụdị jelly-dịka, ihe dị arọ nke na-agba gburugburu spam bụ nke gelatins ma na-ewusi anụ e ji mee ihe. Dabere na spam, ị nwere ike ịchọta n'ebe ndị ọzọ ihe ndị ọzọ dị ka ọkụkọ, toki, ọgwụ, na ose. Spam na-abata na iche iche flavors na mmasị n'ụwa nile..Ọ nwere ma sodium dị elu na ala dị ala karịa nri ọ bụla ọzọ.
Olee otú e si eji spam?
Ị nwere ike ime akpọ nkụ, ighe, gwu ma ọ bụ rie spam na ụdị oyi. Enwere ike iji ya mee ihe, nke pụtara kpo oku bụ nhọrọ. Ụzọ kachasị mma iji spam bụ pan-enyi, yana nhicha kachasị amasị gị ma ọ bụ àkwá. Ị nwere ike iji ya maka nri ụtụtụ ka ọ bụ nri nri. A pụkwara iji spam mee ihe na burgers, sandwiches, pizzas, na curries. Ndị na-agba Spam bụ ndị a ma ama maka ihe ha ji emepụta na nke pụrụ iche nke anụ a na-eri. Ọ bụghị nri na-atọ ụtọ ma na-edozi ahụ, ma ị nwere ike ime ya akụkụ nke nri gị kwa ụbọchị dị ka ọnyà spam nwere ọtụtụ ihe nchebe na abụba jupụtara na ya. Ọ bụrụ na ị na-aga ebe ị mara ụlọikwuu, ịnwere ike ịbịara gị n'ụdị oyi.
A na-ejikarị spam eme ihe na Waikiki na n'akụkụ ndị ọzọ nke Hawaii. Na izu ikpeazụ nke Eprel, ememme a na-eme ememe ma raara onwe ya nye spam aficionados. Ọ bụ otu n'ime ememme ndị a ma ama na United States of America. N'oge a, ndị obodo na-ere ọtụtụ spam, a na-erekwa ọtụtụ nde. E wezụga nke ahụ, Austin nwere ụlọ ngosi ihe ngosi spam pụrụ iche, na ụlọ ọrụ Hormel, nke dị n'obodo a, na-ere ma na-ere spam n'ọtụtụ buru ibu. Obodo nke Shady Cove na Oregon bụ onye a ma ama n'ụwa nile maka nhazi oge ọ na-eme kwa afọ.
Spam na Pop Culture
Ọ dị mma ikwupụta na spam aghọwo akụkụ dị mkpa nke omenala ndị America kemgbe Agha Ụwa nke Abụọ. N'oge ahụ, a na-eji ya na agha dịka isi iyi nri maka ndị agha. Mgbe agha ahụ gwụrụ, Hormell chịkọtara ìgwè ndị na-agụ egwú na ọtụtụ ụmụ agbọghọ ndị a maara dịka Hormell Girls. Ụmụ nwanyị ndị a na - akwado spam ma jiri nlezianya na - elekọta ndị mmadụ.